Urur Siyaasadeed Xaqsoor ee Puntland oo ugu yeeray Xukuumadda Puntland in ay latimaado Siyaasad & Miisaaniyad cad oo ku wajahan Caabuqa Corone-Virus
March 28, 2020 NEWS 2
GAROOWE(P-TIMES)- Urur Siyaasadeed Xaqsoor oo katirsan 17 Urur siyaasadeed oo dhawaan u diyaar garoobaya ka qeyb noqoshada Xisbiyada rasmiga ah ee Puntland, ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay uga hadlayaan arrimaha ku wajahan Caabuqa-Corone Virus, sida ay muhiimka u tahay in ay bulshadu uga hortagto Cudurkan.
Warsaxaafadeed laga soo saaray xarunta Ururkan, oo lasoo gaarsiiyey PuntlandTimes ayaa lagu sheegay in ay baahi weyn u qabaan sidii bulshada loo mideyn lahaa, waxayna ugu yeereen Xukuumadda Puntland in ay la timaado siyaasad cad iyo Miisaaniyad wax looga qabanayo arrintan.
Urur siyaasadeedka ayaa ku yiri warsaxaafadeedkan “Xaaladda cudurka/fayraska Covid-19 waxay maraysaa marxalad adag oo u baahan go’aan qaadasho geesinimo leh, talaabooyin degdeg ah iyo fulin masuuliyad ku dheehantahay, si looga digtoonaado in uu cudurku ku faafo geyigeenna Puntland gaar ahaan iyo Soomaaliya guud ahaan” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan.
XAQSOOR, waxay soo jeediyeen 7 qodob oo ay sheegeen in ay muhiim tahay in si deg deg ah wax looga qabto, waxayna cadeeyeen in qodobadan oo la hirgaliyo ay wax badan ka bedeli karaan xaaladda hadda, kuwaas oo kala ah.
Sidaa darteed, urur siyaasadeedka XAQSOOR isaga oo ka duulaya mabaadi’diisa guud waxa uu:
1. Boogaadin go’aamada ay qadatay xukuumaddu si looga hortago inuu cudurkani faafo.
2. Ugu baaqayaa dowladda iyo dhinacyada ay khusayso in si masuuliyad ku jirto loo fuliyo go’aamada iyo talaabooyinka lagaga horatagaayo faafitaanka cudurka KAROONAHA ( COVID-19).
3. kula talinayaa xukuumadda in ay qorshe cad iyo miisaniyad u dejiso ka hortaga iyo la tacaalidda cudurka, wixii ku aadkaadana ay bulshada la kaashato.
4. U soo jeedin Bulshada inay u hogaansanaato amarada ka soo baxaya xukuumadda.
5. Ka codsan dadweynaha in warka iyo talooyinka ku saabsan fayraskan laga qaato wasaarada caafimaadka iyo xirfadleyda caafimaadka .
6. Ku dhiirigelin in qaybaha bulshadu iska kaashadaan sidii ay u sameyayn lahayeen wacyigelin dheraad ah oo lagaga hortagaayo faafidda cudurkan, lana gaadhsiiyo meelaha dadku ku badan yihiin.
7. Ka codsan in ganacsatadu ka fogaadaan inay qiima kordhin ku sameeyaan badeecadaha iyo cuntooyinka daruuriga ah, isla markaana waa in dadka danyarta ah iyo xoogsatada loo fududeeyo waxyaabaha ay isku ilaalin lahaayeen markay nolol maalmeedkooda raadsanayaan.
Ugu danbeyn: Ururka XAQSOOR isaga oo u hogaansamaya talooyinka ka soo baxay guddida ku-meelgaadhka ah ee doorsahada Puntland – TPEC, 28/3/2020, waxay dib u dhigayaan kulamada waaweyn ee ururka u qorsheysnaa, isla markaan waxa uu ururka XAQSOOR iyo taageerayaashiisu si mug leh uga qayb-qaadanayaa dadaalada wacyigalinta iyo abaabulka bulshada ee ka hortagga faafista cudurka KAROONAHA ( COVID-19) iyo la tacaalidiisa.
Ok fare enough. Waxaa moodaa in warmurtiyeedka uruukaanu waafaqsanyahay magaca uu la baxay.
Faarax alcadaala says:
Waxaan filayaa in uu yahay urursuyaasadeedkii ugu horeeyey ee ka naxa bulshada waxaan rajaynaynaa in ururku uu noqdo mid ka turjuma dareenka shacabkashacabka waxaanu taageeridoonaa lana shaqayndoonaa ururkii aan u aragno inuu bulshada matalo ama dir.naxaya